Usoro 2021 Nkwukọrịta Dijitalụ Ga - enyere Gị Aka | Martech Zone
Usoro 2021 Nkwukọrịta Dijitalụ Ga - eme Ka Ọzụma Azụ Gị Dịkwuo Mma
Monday, December 7, 2020 Monday, December 7, 2020 Jeroen Van Glabbeek
Ahụmịhe ndị ahịa enwegoro abụrụla ihe anaghị akwụ ụgwọ maka azụmaahịa chọrọ ịdọta ma jigide ndị ahịa. Ka ụwa na-aga n'ihu ịbanye na oghere dijitalụ, ọwa nkwukọrịta ọhụrụ yana nyiwe data dị elu emeela ohere maka ndị otu iji melite ahụmịhe ndị ahịa ha ma gbanwee ụzọ ọhụrụ ha si azụ ahịa.
2020 abụrụla otu afọ jupụtara n'ọgba aghara, mana ọ bụkwara ọtụtụ ndị azụmaahịa ka ịmalite ịmalite ịnabata dijitalụ - ma ọ bụ site na ịgbakwunye e-commerce na onyinye ha ma ọ bụ site na ịkwaga na ntanetị data ntanetị. Site na ọtụtụ mmadụ na azụmaahịa na-agagharị n'ịntanetị, gịnị ga-ejide 2021 n'ihe banyere nkwukọrịta dijitalụ? Kedu ihe ụlọ ọrụ nwere ike ime iji kwadebe maka ihe na-abịa?
1. Ọdịnihu dị ekwentị - ọ dịkwalarị ebe a
Ulo oru di iche iche amalitela ichoputa otu osi di nfe ijiko ndi ahia site na igwe na ngwà di iche-iche. Ọ bụ ezie na omume a adịworị n'ime ụlọ ọrụ na azụmaahịa dị iche iche, COVID-19 agbalitela mkpa maka mmekọrịta dịpụrụ adịpụ, mkparịta ụka mkpanaka n'etiti ndị ahịa na azụmaahịa.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ndị bụ, n'ezie, n'ịntanetị, a na-eji ọtụtụ oge eji ekwentị eji ihe egwu na nyiwe ozi ndị ọzọ karịa naanị ihe nchọgharị. WhatsApp bụ ugbu a ọkacha mmasị ozi n'elu ikpo okwu n'ụwa nile.
N’ọnwa Ọktọba 2020, ndị ọrụ ijeri abụọ na-enweta WhatsApp kwa ọnwa, Facebook Messenger (ndị ọrụ ijeri 1,3 kwa ọnwa) na WeChat (ndị ọrụ ijeri 1,2 kwa ọnwa).
Yabụ, ụlọ ọrụ kwesịrị ilekwasị anya na ịchọpụta ụdị ekwentị mkpanaaka ndị ahịa ha nọ na ya, na ịchọta ụzọ iji ruo ha na nyiwe ndị ahụ.
Dika mmadu ole na ole na-aga ebe a na-echekwa brik na ngwa agha, iji nyiwe nke ntaneti iji zụọ ahia ga-abawanye, ya na ya, usoro nkwukọrịta mkpanaka. Maka azụmaahịa na-erite uru site na mkparịta ụka mkpanaka, ha chọrọ ụzọ ọsọ ọsọ ma dị irè iji mejuputa sistemụ dị mkpa maka ya. Ndị ụlọ ọrụ na-achọ ngwọta nkwụnye na-egwu dị mfe nke na-enyere ndị ahịa aka ikwurịta okwu, imekọrịta, na ịkwụ ụgwọ na obere nsogbu enwere ike. Igwe ojii nke na-eme ka ọwa nkwukọrịta na ọrụ ịkwụ ụgwọ na-eduga n'okwu a.
2. Izi ozi mmekọrịta iji wulite mmekọrịta
Achọpụtara ọrụ izi ozi ka ewu ewu karịa na 2021. N'ime ọkara nke mbụ nke afọ 2020, Ozi ijeri 1.6zigara ụwa niile site na nyiwe CM.com - nke ahụ bụ 53% karịa karịa ọkara mbụ nke 2019.
Anyị achọpụtala na ozi adịla ọgaranya ma nwekwuo mmekọrịta - ha abụkwaghị naanị ozi, ma dị ka mkparịta ụka. Azụmaahịa ahụwo na ndị ahịa nwere ekele maka ihe ndị a mmekọrịta mmadụ na ibe ma nwee mmasị na mkparịta ụka ha.
Chọta ndị ahịa ọhụrụ abụrụla ihe siri ike n'ihi na ọtụtụ ndị mmadụ na-anọ n'ụlọ, nke pụtara na ịzụ ụkwụ agaghị adị irè na ịnya nnweta ndị ahịa. Omume a ga-aga n'ihu na 2021, na-eme ka ọ bụrụ ihe dị mkpa maka ụlọ ọrụ ịghọta na ha kwesịrị iwusi mmekọrịta ha na iguzosi ike n'ihe ha na ndị ahịa dị ugbu a ike. Mkparịta ụka mmekọrịta na nkeonwe bụ ụzọ dị mma iji malite ịme nke ahụ.
3. Amamịghe echiche ke Forefront
Dika ulo oru ahia na ebido ikwurita okwu banyere ndi ahia ha ikwusi iguzosi ike n'ihe, ha gha enwe ike irite uru site na akpaaka - ihe ozo di nkpa di nkpa di na nwunye.
Amamịghe echiche na-enye ndị azụmaahịa ohere ịkwalite ọrụ ha ngwa ngwa na n'ụzọ dị irè site na iji bọtịnụ dị mfe. Enwere ike itinye mmejuputa aka iji zaghachi ajụjụ, nye ozi, ma ọ bụ ọbụlagodi arịrịọ. Nkwukọrịta nke AI nyere iji algọridim iji bulie usoro ma zaghachi ha n'ụzọ kachasị mma, na-eme ka ụzọ dị iche iche esi azụ ahịa.
Chatbots ga-akwado $ 142 ijeri na-ere ahịa na-eji 2024, ihe karịrị 400% site na $ 2.8 na 2019.
Dika ulo oru di iche-iche choro usoro ndi ozo iji gboo mkpa ha, ha kwesiri ile anya na ndi ha na ndi oru uzu nwere mmasi nke ichota ihe ndi ozo, nwee ike ime ka onyinye ha di nma, nke a puru inye nsogbu AI n'otu ngwugwu.
4. Ego Agbanyela Dijitalụ
Kedu oge ikpeazụ ị gbanwere ego na azụmaahịa? Ego ka ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kpamkpam na ndụ anyị, na mgbe ịkwụ ụgwọ kaadị na-arụ ọrụ dị mkpa na nke a, ịkwụ ụgwọ ekwentị na-enwetakwa ike. Slọ ahịa nwere nhọrọ na-enye gị ohere i scanomi koodu QR iji kwụọ ụgwọ, ụlọ akụ amalitela ikwe ka ego nyefee nọmba ekwentị, ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị aghọwo ihe ọhụrụ.
Ọnụ ahịa ahịa ụwa nke ịkwụ ụgwọ ekwentị ga-ebili site na $ 1,1 ijeri na 2019 ruo $ 4,7 na 2025. Dịka ịkwụ ụgwọ dijitalụ ga-abawanye ka anyị na-abanye na 2021, ụlọ ọrụ ndị nwere ike ịnye ahụmịhe ịkwụ ụgwọ na-enweghị ntụpọ maka ndị ahịa ha bụ ndị ga-eme nke oma.
Mordor ọgụgụ isi
N'ikwu ya, anyị kwesịrị ịmụrụ anya maka ihe egwu dị na ntanetị na ntanetị. Cyberattacks bụ ezigbo ihe iyi egwu, ọnụọgụ ha abawanyela yana ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị. Atingkụziri ndị ahịa na ndị ọrụ na nchekwa data bụ isi ihe na-aga nke ọma nke sistemụ ahụ.
5. Voice-nyemaka Technology
Ngwaọrụ akụrụngwa nke ụlọ emeela ka ogo na njiri mara teknụzụ amata okwu. Nke a meghere ohere imepụta ihe n'ime oghere teknụzụ ọdịnala. Enwere ike dochie ihe nlere nke otutu otutu ulo akwukwo nke ochie site na ndi enyi enyi, ndi na-ekwu okwu. You nwere ike iche n'echiche ịgwa bot na-enye gị azịza ziri ezi na-akpaghị aka ma ọ bụ jikọọ gị na ngalaba aka nri, na-enweghị ọbụnadị na ị maghị na ị naghị agwa mmadụ okwu?
Nke a nwere ikike dị ukwuu iji nwekwuo afọ ojuju ndị ahịa ma belata ụgwọ ọrụ ma ọ bụrụ na etinyere ya n'ụzọ ziri ezi.
6. Hyzọ ngwakọ
Ọrịa a emeela ka ọtụtụ ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ, anyị ahụla na ebe a na-akpọ oku na-agbanwe ka ọ bụrụ ebe a na-akpọtụrụ yana, n'ọnọdụ ụfọdụ, na-anọchite naanị isi kọntaktị nke ndị ahịa nwere ụlọ ahịa. Ọ bụ ezie na mmepe a amalitelarị tupu 2020, ọ dị ugbu a, na-eme ka isi okwu ndị a dị mkpa karịa ka ha dị na mbụ. Iji mee ka ibu arọ dị na 'ebe a na-akpọtụrụ', ndị ọchụnta ego kwesịrị ịchọpụta ụzọ nkwukọrịta ndị ọzọ ha nwere ike iji wulite mmekọrịta na ndị ahịa.
Ndị ụlọ ọrụ na-amalite ilekwasị anya na iji ụdị ngwakọ, ebe ndị mmadụ na igwe na-arụ ọrụ nke ọma. Nke a na-enye ndị ahịa ụwa niile kachasị mma: ndị mmadụ nwere ọmịiko karịa, ebe kọmputa nwere ike ịme ihe ka ọfụma. Ike anyị nwere ijikọ uru nke ụwa abụọ a ga-akawanye mma n'ime afọ ọzọ.
Gbaa mbọ hụ na ahụmịhe kachasị mma
Organitù ndị na-eji ahụmịhe ndị ahịa akpọrọ ihe ga-eguzo site na mkpọtụ ma merie ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe. Agbanyeghi na enwere ike inwe ọtụtụ nsogbu na mbido 2021, otu ihe doro anya: iji nyefee ahụmịhe dị mma, ị ga-amata ndị ahịa gị karịa ka ị dị na mbụ. Taa, ndị ahịa nwere ike na nhọrọ karịa ka ha nwetụworo, na-eme ka ị bụrụ ọrụ maka nghọta na ịnakwere mkpa ha.
Ozugbo ị matara ndị ahịa gị nke ọma, ịnwere ike iji ihe ọmụma ahụ hazie mmekọrịta ọ bụla ma were ahụmịhe ndị ahịa a na usoro nkwukọrịta dijitalụ.
Tags: aiusoro ndị ahịankwukọrịta dijitalụusoro nkwukọrịta dijitalụnkwukọrịta ngwakọmmekọrịta mmekọrịtaugwo ugwousoro ekwentịọnọdụ
Jeroen Van Glabbeek Monday, December 7, 2020 Monday, December 7, 2020
Jeroen Van Glabbeek
Tupu ịtọ ntọala CM.com dị ka ClubMessage na 1999 yana Gilbert Gooijers, Jeroen gụrụ Management Technology na Mahadum nke Technology na Eindhoven n'etiti 1997 na 2002. Na 1998, ọ malitere ọrụ ya dị ka onye njikwa ọrụ na Getronics PinkRoccade Civility.
Nzọụkwụ 8 Iji Kpoo Peeji Ihu Ọma
Kedu oge kachasị mma iji zipu ozi ịntanetị gị (Site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe)?